Accueil > Gazetin'ny nosy > Edouard Andrianjafintrimo : Mpanao gazety malagasy mahaleotena voalohany
Edouard Andrianjafintrimo : Mpanao gazety malagasy mahaleotena voalohany
140 taona katroka amin’ity andro anio 28 May ity I Edouard Andrianjafintrimo. Mpanoratra izy ary mpanao gazety. IZy no mpanao gazety Malagasy voalohany teo amin’ny sehatra hoe “mahaleotena”. MPikatroka VVS Koa izy. Amin’ny maha-mpanoratra azy dia nanana solon’anarana maromaro izy.
I Lucien Randrianarivelo ao anatin’ny boky “Ratany, mpampianatra tao Anatirova” dia milaza an’Andrianjafintrimo ho “tia tanindrazana hiringiriny”. Ny asa soratra sy ny fanaovan-gazety no nanehoan’Andrianjafintrimo izany fitiavan-tanindrazana izany. Hoy rahateo izy hoe “Ny olona mahalala vaovao sy notezaina amin’ny fahalalana no olona afaka hanana fahendrena sy ho tia ny tanindrazany”. Izy no anisan’ireo Malagasy voalohany mpanao gazety. Ny taona 1906 no namoriny ny gazety “NY BASIVAVA” gazety Malagasy voalohany tsy miakina amin’ny fivavahana niaraka tamin-dRalaimanisa. Rehefa noraran’ny fitondrana mpanjanaka tsy nahazo nivoaka ny gazety “Ny Basy Vava” ny taona 1810 dia namoaka ny gazety “Loharano” izy ny taona 1914.
Nantsoan’ireo dokotera mpanorina ny VVS hiditra mpikambana VVS izy ny taona 1914 ka nosokajian’ireo mpitarika ny VVS ho isan’ireo nampiroborobo ny VVS izy.
Ny 28 Desambra 1915 no nivoka ny didim-pitsarana goavana nanameloka an’Andrianjafintrimo fa isan’ireo “Sous-Chef” tao amin’ny Vy Vato Sakelika, ka voaheloka nanao sesin-tany sy hanao asa an-terivozona mandritra ny folo taona any Dzaoudzi izy.
Noeken’ireo mpanoratra Malagasy tamin’izany fa “Lahimatoan’ny mpanoratra I Edouard Andrianjafintrimo. “Prince des Poëtes” no niantsoana azy ary izany anaram-boninahitra izany no notondran-dRobinary azy teo anatrehan’ny « Association Nationale des Ecrivains de la Mer et de l’Outre Mer tany Parisy ny taona 1961.
Ny faha-15 Martsa 1972, no niamboho teo amin’ny faha-91 taonany izy, ary anio no tsarovana ny faha- 140 Taona nahaterahany.